Ampidiro ny sari-tany ao Excel - mahazo koordinatera jeografika - mpandrindra UTM - Geofumadas
Janoary, 2018 Cartografia, Google Earth / Maps, Pirinty voalohany
Map.XL dia fampiharana izay ahafahanao mampiditra sarintany ao Excel ary mandrindra mivantana avy amin'ny sarintany. Azonao atao ihany koa ny mampiseho lisitry latitudes sy longitudes amin'ny sari-tany.
Ahoana ny fampidirana ny sari-tany ao Excel
Raha vantany vao tafiditra ny Programa dia ampidirina ho tabilao fanampiny antsoina hoe "Map", miaraka amin'ny endri-javatra Map.XL.
Alohan'ny hampidirana ny sari-tany dia tsy maintsy ampifanarinao ny sari-tany aoriana, izany dia atao amin'ny kisary «Mpamatsy sarintany». Azo atao ny manamboatra ny mombamomba amin'ny alàlan'ny sarintany, sary na hybrid roa avy amin'ny serivisy:
Ny sarintany dia miorina eo amin'ny ankavanana, saingy azo alaina izany mba hahafahan'izy ireo misidina, na eo ambany / ambony ny latabatra Excel.
Ity lahatsary ity dia mamintina ny fomba fanazavan'ity dingana manontolo ity ato amin'ity lahatsoratra ity, dia niasa tamin'ny tsenan'ny plot iray mampiasa Bing Maps ho toy ny fototra.
Ahoana no ahazoanao mandrindra ny Excel
Vita amin'ny sary masina "Get coord". Ny fomba fanao dia amin'ny ankapobeny:
Tsindrio «Get Coord,
Tsindrio ny sari-tany,
Tsindrio ny cellule Excel
Eo am-piasana, ampiasao ny "Ctrl + V", na ny bokotra ankavanana ary mifidiana Paste.
Ahoana ny fomba hanaovana ny lisitry ny Coordinates
Ny môtera aseho amin'ny lahatsary, ohatra, dia natsangan'i Geofumadas, ary mamela anao hametaka ny koorda mifanaraka amin'ny marika iray, mba hahafahanao ho afa-po amin'ny latabatra latabatra sy latabatra.
Maimaimpoana ny MapXL, ary azonao sintonina avy amin'ity rohy ity. Sintomy koa ny latabatra Excel ampiasaina ao amin'ny ohatra.
Alefaso any amin'ny sarintany ireo kôlôrina.
Izany dia vita amin'ny kisary «Mpanondro doka», rehefa nisafidy ny faritra amin'ny latabatra mahaliana anao. Avy eo dia miseho ny endrika iray hanondroana ny saha inona ny latitude, izay ny Longitude, ny antsipirian'ny fandrindrana ary ny tandindon'ny sarintany. Mba hanesorana azy ireo dia mila manao "Delete Markers" fotsiny ianao.
Download eto Map.XL, anisan'izany ny template Excel.
Ity horonantsary ity dia mampiseho ny dingana hazavaina ato amin'ity lahatsoratra ity, amin'ny fampiasana ohatra amin'ny fanehoana ny fitsidihana amin'ny volkano, mampiasa ny Open Street Maps ho toy ny fototra.
Jereo ny UTM mifototra amin'ny sari-tany avy amin'ny Excel:
Ity fiasa aseho etsy ambony ity dia mampiseho ny fandrindrana jeografika hijerena ny sarintany ao amin'ny Excel. Raha te hampiseho fandrindrana izay ao amin'ny Universal Traverso Mercator (UTM) amin'ity sari-tany ity ianao, dia mila mampiasa maodely toa izao. Ny ohatra aseho amin'ny sary sy ny video dia izao:
Afaka mahazo modely eto ianao.
Previous Post«Previous Bentley Systems dia manitatra ny tetikasa fanorenana sy torolàlana momba ny asa vita amin'ny alàlan'ny famoahana ny S-Cube Futuretech
Next Post Tongasoa eto amin'ny vanim-potoana vanim-potoanamanaraka »
9 Mamaly ny "Atsofohy ny sari-tany ao Excel - mahazoa koordinary jeografika - fandrindrana UTM"
Sarin'i Javier Arrocha nametraka sary hoy izy:
Mey, 2020 ao
Misy fomba iray hikaroka amin'ny anarany na ny adiresy ve ??
Jona, 2019 ao
Eny, tokony miasa ara-dalàna izy io.
Juan José hoy izy:
Hello, mahomby ve izany amin'ny Excel Office 365? Tsy hitako ny tabilao Map taorian'ny fametrahana azy.
Miala tsiny. Tsy nahatsikaritra izahay.
Juan Pablo Meyer Cal y Mayor hoy izy:
Hello, ny rohy mankany amin'ny download map.xl dia mbola tsy mavitrika.
IS ny rohy mena.
Azonao atao ny maka ilay rindrambaiko
Shokit hoy izy:
Nafahako ny môdely saingy tsy misy rohy ho an'ny rindrambaiko.
Azafady afaka manampy anao ianao.
Toy ny hita amin'ny endriny hafa amin'ny langua hafa noho ny voalohany (Espaniôla), ny rohy sy ny endrika endrika finday dia hita.
Mandehana mankany amin'ny sainam-pifaneranana footer ary mifidiana ny Espaniola.
Noho izany, hahita ny endrika sy ny rohy ianao.
Ity lahatsoratra ity ihany koa amin'ny fiteninao
shokit Ali hoy izy:
Ahoana no ahafahako maka ny map.xl amin'ny programa excel